ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » တစ်ဦးကမျက်မမြင်နေ့စွဲဘယ်လိုချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မည်တွင်ငါးခုအကြောင်းသိကောင်းစရာများ
ချိန်းတွေ့တဲ့စိတ်ညစ်စရာအတွေ့အကြုံရနိုင်ပါသည်. မျက်စိကန်းသောသူတို့သည်ချိန်းတွေ့တဲ့စိတ်ညစ်စရာအတွေ့အကြုံအပေါ်မှောင်မိုက်၌သင်တို့အထဲကထွက်ခွာနိုင်. သို့သော်မျက်စိကန်းသောရက်စွဲအတွေ့အကြုံရှောင်ရှားရန်မလိုပါင်. သင်နဲ့တွေ့ဆုံရပါလိမ့်မယ်ဘယ်သူသိဘယ်တော့မှမ.
ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ် - သင့်ရဲ့မျက်စိကန်းသောသူတို့သည်ရက်စွဲသင့်မျှော်လင့်ချက်များသော့ချက်ဖြစ်နိုင်သူကိုစိုက်ထူ. သင်တို့၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးရက်စွဲအကြံပြုပြီဆိုရင်, ဒီလာမယ့်မိတ်ဆွေထံမှစေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်စဉ်းစား. သူတို့သည်သင့်ကို set up ရန်နှင့် အကယ်. သင်၏ရက်စွဲပေါ်တွင်မျှဝေပါလိမ့်မယ်သူတို့ထင်တဲ့ connection များအဘယ်လိုလူစားချင်တယ်အဘယ်ကြောင့်မေးကြည့်ပါ. ဒါဟာပထမဦးဆုံးအကြိမ်တစ်စုံတစ်ဦးကအသစ်တွေ့ဆုံသည့်အခါရှိသည်တန်ဖိုးရှိသောနောက်ခံအချက်အလက်တွေရှိနိုင်ပါသည်.
ပေါ့ပေါ့တန်တန်တည်နေရာ - ကောင်းတစ်ဦး၏တည်နေရာကန်းရက်စွဲလွယ်ကူစေနိုင်သည်. တစ်နေရာရာမှာသင်သည်နှစ်ခုစလုံးကိုမျှော်လင့်အားအဘယ်သို့သိဘယ်မှာပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့ပျော်စရာကိုရွေးချယ်ပါ. ကဖေးနှင့်စားသောက်ဆိုင်ကဲ့သို့သောပေါ့ပေါ့တန်တန်သောအရပ်တို့ကိုမကန်းရက်စွဲများအတွက်အလွန်ကောင်းနေတယ်. ထိုကဲ့သို့သောရှိသမျှကောင်းသွားလျှင်အတူတကွသွန်းလောင်းရှိခြင်းကြောင့်ကာလတိုအတွက်ရွေးစရာရှိပါတယ်, ရက်စွဲရှည်လျားတဲ့ညစာရက်စွဲနဲ့သို့တိုးချဲ့နိုင်. လည်း, ပျော်စရာ options များကြီးမြတ်. ထိုကဲ့သို့သော mini ကိုဂေါက်သီးသို့မဟုတ်ဘိုးလင်းအဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများတဦးစကားပြောဆိုမှုအပေါ်အလွန်အကျွံတစ်ဦးအပေါ်အားကိုးမပါဘဲပျော်ရွှင်စရာနှင့် flirty နိုင်ပါတယ်. သင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအကြောင်းဘာမှသင်ယူဖို့အခွင့်အလမ်းမရကြမည်ကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်ရုံအဖြစ်ဘုံချိန်းတွေ့သောနေရာများမရွေးချယ်ပါနဲ့.
သင့်လျော်စွာဝတ်စားဆင်ယင် - Ladies Show မှာအရာအားလုံးထွက်မလိုဘဲခမ်းနားကြီးကျယ်လှသောကြည့်ရှုရန်လိုပေမည်. ပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့အဆင်ပြေကောင်းစွာသတို့သားအရာတစ်ခုခု. အမျိုးသားများရှောင်တခင်ပေမယ်ခမ်းနားကြီးကျယ်လှသောကြည့်ရှုရန်လိုပေမည်. သင်သည်ဤအဖြစ်သက်သာမယ့်အရာတစ်ခုခုကိုဝတ်ဆင်ထား၏အမှားရက်စွဲပေါ်မှာသင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအတွက်တဆင့်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်လုပ်မထားပါနဲ့
စိတ်ချလက်ချစကားပြောဆိုဖို့ – ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်နှင့်သင်ကိုအထူးပြုလုပ်ပေးသည့်အရာ၏အကောင်းဆုံးတခုအဖြစ်. ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့နေ့စွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးမေးရန်မမေ့မလြော့ပါ, သူတို့၏အသက်တာတွင်စိတ်ဝင်စားဖြစ်နှင့်အချို့သောအပြုသဘောဆက်သွယ်မှုများကိုဖန်တီး. သင် datemypet.com တဆင့်တွေ့ဆုံခဲ့မယ်ဆိုရင်, သင်ရှိစေခြင်းငှါတစ်ဘုံအကျိုးစီးပွားအဖြစ်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထဲက buddy ကအကောင်းဆုံးပြသ. သင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနှင့်ဝါသနာကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်တံခါးနားမှာမဆိုဆက်ဆံရေးဟာသမိုင်းစကားပြောဆိုထားခဲ့.
အပြုသဘောရှိသည် - မျက်စိကန်းသောရက်စွဲဖို့သင့်ရဲ့ပြုံးရွှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယူမှသေချာပါစေ. သင်အသစ်များတစ်စုံတစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းရဖို့နဲ့ကိုယ့်စီးဆင်းမှုနှင့်အတူသွားတာဘဲပျော်ရွှင်စေ. အလွန်ကြီးစွာသောရက်စွဲရှိခြင်းဖို့အဓိကသော့ချက်ပျော်ရွှင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်နှင့်သင့်ကပင်မျက်စိကန်းနေ့စွဲပျော်မွေ့.